ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်စွာမွေးဖွားခဲ့သော INSTA ပုံပြင်များကိုလူတိုင်းမလုပ်နိုင်တော့ပါ။ - သတင်း
ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်စွာမွေးဖွားခဲ့သော Insta ပုံပြင်များကိုလူတိုင်းမလုပ်နိုင်တော့ပါ။
မကြာခင်မှာပဲမင်းက Instagram ကိုသွားပြီးတခြားသူတွေရဲ့ဘဝအတုတွေကိုသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ နံနက်ယံ၌ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏အိပ်ယာခင်းနံဘေးတွင်သင်၏ဖုန်းကို ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အလင်းရောင်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုနှိုးပြီးသင့်သူငယ်ချင်းများကိုလွန်ခဲ့သောညကအဖြစ်အပျက်များမှ Boomerang တွင် espresso martinis အမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သို့သော်ယနေ့တွင်မူထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့အခြေခံဘဝတွေကိုမင်းရဲ့လည်ချောင်းထဲပစ်ချဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး။ အဲဒီအစားသူတို့ကအများကြီးတစ်ခုခုမှကျူးလွန်ပါတယ်, အများကြီး ပိုဆိုးသည်မှာ - ၈-၁၂ Instagram ပုံပြင်များမှသူငယ်ချင်းများကိုပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ခရစ်တော်, ဒီငရဲကလေးကဘယ်လိုခံစားရသလဲ
သင်၏သူငယ်ချင်းအလယ်တန်းကျောင်းမှဆိုဖီသည်သူမ၏သူငယ်ချင်း Claire အား A. ပျော်ရွှင်စေလိုသည်။ မွေးနေ့။ ရန်။ အကောင်းဆုံး။ ဘို့။ ဘဝ သူမ အရမ်းရယ်ရတယ် နှင့်စမတ်။ သူမကိုချစ်ပါ။ ပျော်ရွှင်သော ၂၁ ။
ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့သင်တန်းကိုတက်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ရည်းစားအတွက်မွေးနေ့ပွဲတွေဆက်တိုက်လုပ်နေလိမ့်မယ်။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့။ ကိုယ့်အချစ်။ မယုံနိုင်ဘူး လေးလပြည့်ပြီ ရှိပြီးသား ဒီနေရာကနောက်ထပ်ငါးလအထိပါ။ ငါဘွဲ့ရပြီးနောက်သင်စကားမပြောနိုင်မီ X
ပြီးတော့ Liam မဟုတ်ဘူး။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ မင်းရဲ့အမေရဲ့ ၆၀ နှစ်ဆယ်ကာလအပိုင်းအခြားကိုငါဂရုမစိုက်ဘူး။ သူမ၏ကဒ်ပို့ပေး !! သူမကိုငါ့ချစ်သူဆီပို့ပါ ဒါပေမယ့်သူမမှာ Instagram တောင်မှမရှိဘူး။
မျှဝေသည် ချစ်သူ (@thediyora) မေလ ၂၂ ရက်၊
ဤပုံပြင်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် Kylie Jenner ၏နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုနားထောင်ခြင်းထက်သင့် ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာဆုံးရှုံးစေသည်။ ဒါဟာတရားမဝင်သင့်ဘူး။
ပထမတစ်ခုကတော့ပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပျင်းစရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာသုံးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်ကအသိအမှတ်ပြုထားလို့ပါပဲ။ အကယ်၍ မဟုတ်လျှင်၊ ၎င်းတို့ကိုတင်ပို့သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်တော်သောဓာတ်ပုံများပြသရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်မွေးနေ့ပွဲများသည်အဆုံးမဲ့လူတန်းစားများကိုဖန်တီးပေးပြီး၎င်းတို့အကြောင်းကိုသူတို့၏အဖြစ်အပျက်များကိုဝေမျှပေးသည် ကိုယ်ပိုင် ပုံပြင်တွေကအရမ်းပဲ။ သင်တို့အားလုံးမှာအဖွဲ့လိုက်စကားပြောတာလား၊ တစ်ခုခုရှိလား။ ဒါကိုကောင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းအစား DMed ကိုမင်းသူငယ်ချင်းမရနိုင်ဘူးလား။
သို့သော်အဆိုးဆုံးမှာလူတစ် ဦး အတွက်မွေးနေ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်တစ်ချိန်ကအခြားလူများအတွက်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါမဟုတ်တာကိုမင်းမသိဘူး၊ တကယ်တော့ငါ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်
အန်နာက“ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကမွေးနေ့မှာ Instagram ကိုအမြဲတမ်းပျော်နေသည်။ သူမသည်လူတစ် ဦး လျှင်ဆလိုက်သုံးခုခန့်ပြုလုပ်သည်။ သူတို့သည်ညညမှဓါတ်ပုံများကိုချစ်စရာကောင်းသောဓာတ်ပုံများရှိသည်။ လူ ၁၅ ယောက်ခန့်ရှိသည်။ သူကလူတိုင်းအတွက်တင်သည်။ ဟော်ကီနှင့်အလုပ်မှသိသိသာသာသိသောသူများ - အခြေခံအားဖြင့်လူတိုင်း သူမ၏ဘဝ၌။
'' ဒါပေမယ့်ငါ့မွေးနေ့မှာသူလုပ်ဖို့မေ့သွားတယ်၊ တစ်နေ့လုံး MY Instagram ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့တာပါ။ ငါတကယ်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်။ အမှားဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အလုပ်မှာ ist ည့်ကြိုဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့သူမသတိရတဲ့အခါသူမကသူမရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုမေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံရခက်တယ်။ '
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤပြaနာသည် 2019 ခုနှစ်တွင်မည်သို့မည်ပုံနားမလည်ပါ။ မင်းဒီနေရာကို ဦး ဆုံးကြားတယ် မွေးနေ့ Instagram ပုံပြင်များကိုနောက်မနှောင်းမီရပ်တန့်ရန်လိုသည်။
• Instagram တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုသင်ကိုယ်တိုင် ၀ ယ်ယူခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ